Sawirro: Dowladda Qadar oo Dowladda Federaalka ku wareejiyay Gaadiid Casri ah oo loogu tala galay in…. – Kismaayo24 News Agency
Sawirro: Dowladda Qadar oo Dowladda Federaalka ku wareejiyay Gaadiid Casri ah oo loogu tala galay in….
by admin 17th April 2018 060
Dowladda Qadar oo saaxiib dhaw la ah dowladda Soomalia ayaa waxa ay Soomalia ugu deeqday gaadiid casri ah oo loogu tala galay adeegyada bulshada.
Gadiidkaan oo qeyb weyn ka qaadan doona adeegyada bulshada ayaa 17-kamid ah waxaa lagu wareejin doona maamullada dagmooyinka gobolka banaadir iyadoona qeybaha kale ee gaadiidkaan casriga lagu wareejin doono maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Wasiir ku xigeenka dekadaha, maareeyaha dekadda Muqdisho, guddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir iyo masuuliyiin ka tirsan safaadaradda Qatar ee magaalada Muqdisho ayaa munaasabadda ka qeyb galay.
Dowladda qadar waxa ay tartan xooggan kula jirtaa dowladda Imaaraat-ka oo ay mandiqada isku hayan waxaana qadar ay dooneysa in ay xoojiso xiriirka ay soomalia la leedahay si Imaaraat-ka kula tartanto guud ahaan gobolka gaar ahaan Soomalia.
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Shiikh aadan Madoobe oo Isku soo sharaxay xilka guddoonka golaha shacabka
War Cusub: Kooxaha burcad badeeda soomaalida oo markale caalamka ka yaabsaday kadib markii ay…..
Tifaftiraha K24 27th May 2017
Top News: Maxaadan Ogeyn oo maanta ka cusub Degmadda Baladxaawo???
Ehelada Muslimiintii lagu laayay dalka New Zealand oo loogu yaboohay.